अरुलाई बचाएर नयाँ जीवन दिने डाक्टर पूज्यश्री कार्कीको कोरोनाबाट निधन ! – Sandesh Press
May 19, 2021 780
आँखारोग विशेषज्ञ डाक्टर पूज्यश्री कार्कीको निधन भएको छ । उनको कोराना भाइरसको संक्रमणबाट आज विहान निधन भएको हो ।नर्भिक अस्पतालमा डा. कार्की १० दिनदेखि आइसियूमा उपचाररत थिइन् । प्राध्यापक समेत रहेकी डा. कार्की किष्ट मेडिकल कलेजमा आँखा रोग विभागकी प्रमुख थिइन् ।
Prevमेरो आमा पछिको सब थोक तिमी नै थियौ , हामी सबैलाई एक्लै बनाएर कसरी जान सकेउ तिमी !
कुन दिन जन्मिएका केटालाई कुन दिन जन्मिएकी केटी विवाहका लागि उपयुक्त ?